Banyere Anyị - Ningbo Original Ngwa Co., Ltd.
YAMATO Ndị na -eweta ngwa ngwa mbụ
Anyị na-enyekarị Japanese YAMATO ọtụtụ ngwa ngwa klaasị mbụ.
Ningbo Original Ngwa Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ ngwa ịkwa akwa na -ejikọta ụlọ ọrụ na azụmaahịa. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ site na otu Chen Jiali ndị nwere ahụmịhe ịzụta ihe karịrị afọ 12 na ụlọ ọrụ Ningbo YAMATO. Anyị nwere ihe doro anya nke ọma banyere ọwa ahịa nke YAMATO .Enwere ihe karịrị ụdị 3000 nke akụkụ Yamato n'ime ụlọ anyị ， Ọkachamara ọkachamara na azụmaahịa Japan YAMATO ndị na-enweta ịkwa akwa mbụ, wee nye ngwa maka JUKI, SIRUBA, KINGTEX na igwe ịkwa akwa ndị ọzọ dị elu. ụlọ ọrụ.
N'ogbe na azụmaahịa ngwa ndị mbụ ： YAMATO
N'ozuzu ngwa ndị mbụ: JUKI, PEGASUS, BROTHER, SIRUBA, KANSAI, KINGTEX
"Ezi omume dị ukwuu karịa uru" yana "Naanị ree ngwa ịkwa akwa mbụ"
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke "ezi omume karịrị uru" yana "naanị na-ere ngwa ịkwa akwa mbụ", na-ejere ndị ahịa ngwa ịkwa akwa akwa na ụwa niile. Anyị na-ebute ịdị mma mgbe niile. Ndị ọrụ nyocha nke ịdị mma ga -enyocha ngwongwo niile tupu nnyefe, a ga -ebuga ya naanị mgbe enwetara ogo ahụ.
N'ọdịnihu, anyị na-atụ anya imeta ndị enyi na ndị na-emepụta ihe mbụ na ndị ahịa si n'ụlọ na mba ọzọ iji nye ọrụ maka imeputa na ịre ahịa nke igwe ịkwa akwa dị elu na ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, ka ụlọ ọrụ anyị bụrụ "Ningbo akwa akwa", nabata na ụlọ ọrụ anyị.
Mgbe ihe karịrị afọ 5 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, Ningbo Original Ngwa Co., Ltd aghọwo China na-eduga na China-ama emeputa nke ịkwa akwa accessoreis. Na ubi nke elu-ọgwụ ịkwa akwa accessoreis ， Ningbo Original Co., Ltd eguzobewo ya na-eduga mma na ika uru.
Ụlọ ọrụ anyị na-emepụta ụdị ọla kọpa-aluminom nke na-ejikọ ihe mkpanaka
Anyị na -ekwu maka ịdị ike nke oghere mmanụ ọ bụla, oge ọ bụla nke ịghasa na akụkụ ọ bụla, iji hụ na ngwaahịa anyị nwere ndụ ọrụ ihe karịrị afọ 3, ma bụrụ nke ekwenyesiri ike na iji ya eme ihe. N'otu oge ahụ, anyị na-azụlite mkpanaka njikọ bọl na-agba mgbe niile, iji melite akụrụngwa na usoro iji gboo mkpa ndị ahịa. Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike, anyị enyela ọtụtụ ụlọ ọrụ igwe ịkwa akwa dị elu na China, wee kpụrụ akara nke anyị na mkpanaka njikọ ọ bụla iji nye ndị ahịa nzere dị elu ma werekwa ibu ọrụ ndị ọzọ.
Ndị nyocha anyị dị mma arụ ọrụla na ụlọ ọrụ YAMATO afọ 13 ma mara usoro nyocha nke akụkụ dị iche iche. Tupu etinye ngwongwo niile na nchekwa ma nyefee ya, ndị nyocha dị mma ga -enyocha ya iji hụ na ebugara ndị ahịa akụkụ dị mma.Ọ bụrụ na akụkụ adịghị mma, anyị ga -eweghachi akụkụ ahụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị ga -ahụkwa na akụkụ ndị e zigara onye ahịa bụ nke mbụ na nke kacha mma.
Anyị nwere ike nye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile nke YAMATO emere na China China ma nwee ihe karịrị 3000 ụdị akụkụ YAMATO dị na ngwaahịa parts Akụkụ anyị dị na ngwaahịa nwere ike belata oge nchere ndị ahịa.
Onye isi njikwa onye guzobere ụlọ ọrụ anyị, nwere ahụmịhe ịzụta ihe karịrị afọ 12 na Ningbo YAMATO.
Onye njikwa azụmaahịa, rụrụ ọrụ dị ka onye nlekọta dị mma na ụlọ ọrụ mba ọzọ ruo afọ 10, ma sie ike na njikwa mma na Ningbo YAMATO.
Onye njikwa ahịa ， na -arụ ọrụ na ụlọ ọrụ akụkụ ruo afọ asatọ ma nwee ọmarịcha nka na azụmaahịa akụkụ.
QC, n'ime ụlọ ọrụ si mba ọzọ na -eme nyocha dị mma ruo ihe karịrị afọ iri, ngwaahịa niile tupu nnyefe ga -enyocha ya site na onye na -enyocha ya, ndị na -erughị eru ga -alaghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, anyị ga -eziga ndị ahịa na Ningbo YAMATO ngwaahịa kacha mma.
Onye njikwa azụmaahịa mba ofesi ， Amaara akụkụ azụmaahịa azụmaahịa mba ofesi, iji mee ka ndị ahịa nwee afọ ojuju dị ka ebumnuche, gbalịanụ dozie nsogbu maka ndị ahịa.